I-Livestorm: Cwangcisa, uPhumeze, kwaye ulungiselele isiCwangciso sakho seWebinar esiPhakathi | Martech Zone
I-Livestorm: Cwangcisa, uPhumeze, kwaye ulungiselele isiCwangciso sakho seWebhu seWebhu
Lwesine, Disemba 3, 2020 Lwesine, Disemba 3, 2020 Douglas Karr
Ukuba kukho enye imboni eqhume ekukhuleni ngenxa yezithintelo zohambo kunye nokutshixeka, ngumzi mveliso weziganeko ezikwi-Intanethi. Nokuba yingqungquthela ye-intanethi, umboniso wentengiso, iwebhsayithi, uqeqesho lwabathengi, ikhosi ekwi-intanethi, okanye iintlanganiso zangaphakathi… uninzi lweenkampani kuye kwafuneka ukuba lutyalomali kakhulu kwizisombululo zeenkomfa zevidiyo.
Izicwangciso ezingenayo ziqhutywa zii-webinars kule mihla… kodwa ayisiyonto ilula njengoko kuvakala. Isidingo sokudibanisa okanye sokulungelelanisa namanye amajelo entengiso, ukhuphelo lwesoftware kunye nokuhambelana, amaphepha okufika, isoftware yokudityaniswa kwesoftware, isoftware yevidiyo, kunye nohlalutyo phantse zihlala zifuneka ukwakha isicwangciso se-Intanethi esingaxutywanga ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni.
Isiphango: Kwi-Bango, ngokuBukhoma, nakwiiWebhu eziZenzekelayo
I-Livestorm yakhe i-software elula, ekrelekrele, engcono, yewebhu egxile kumava omsebenzisi, ulwazi lokuthengisa kunye noomatshini.
Ungaqhuba nasiphi na isitayile sewebhu usebenzisa isoftware:
IiWebhu ezikwiwebhu -Livestorm sisisombululo esisekwe kwi-HD kwisikhangeli, esingafunanga ukhuphelo lwesoftware. Kwaye, yenza ukuba kwabelane ngescreen, iYouTube okanye nayiphi na into eshukumayo ebukhoma idityaniswe kwiwebhu yakho.
IiWebinars eziqhubekayo -Yisingatha iwebhusayithi enye eneeseshoni ezininzi kwaye ugcine iphepha elifanayo lokufika. Abandwendweli banokukhetha umhla wabo wokukhetha kwiphepha lokubhalisa.
IiWebinars ezirekhodwe kwangaphambili -Ukuba ufuna amava e-webinar angenasiphako, enye indlela yokwenza oku kukurekhoda kwangaphambili kwaye ulayishe iwebhusayithi yakho ukuze uyidlale kubaphulaphuli. Betha nje ukudlala!
IiWebinars ezifunekayo -Faka i-webinar yakho kwaye makubekho ukubukela ividiyo yakho xa befuna.
Eyona nto intle kunayo yonke, akukho mda wokugcina endaweni yewebhu yakho!
Iimpawu zesaqhwithi zibandakanya
Ubhaliso kwiWebhu -Iifom ezenzelwe wena okanye amaphepha obhaliso akhiwe kanye ngaphakathi. Yongeza iindawo ezongezelelekileyo ukwenza umda kwithemba lakho. Kwaye unokufaka iifayile kwiwebhusayithi yakho.
email Marketing -Ngenisa abafowunelwa bakho, thumela isimemo se-imeyile esenzelwe wena, kwaye uthumele ngokuzenzekelayo izikhumbuzo kubabhalisi bakho ukuba bazimase,
Ukusebenzisana kwabaphulaphuli - incoko, iipolls, imibuzo kunye neempendulo, kwaye abahambisi bayo banokuthatha inxaxheba kwi-real-time kunye ne-webinar yakho.
Ukubika -Thatha umthombo wobhaliso kunye nokuhanjiswa, jonga i-faneli yabazimeleyo, ukulandelela ukuthatha inxaxheba, kunye nokujonga iiprofayili zobhaliso kwiwebhu yakho.
Ukuphunyezwa kwethegi -Yongeza uGoogle Analytics, i-Intercom, iDrift, okanye naziphi na ezinye iithegi zeskripthi kumaphepha akho obhaliso.
Integration -Khupha lonke ulwazi lwakho lobhaliso, iimpendulo zokuvota, idatha ye-analytics, okanye uyidibanise neZapier, Slack, ukuThengisa nge-imeyile, ukuThengisa ngokuZenzekelayo, amaPhepha okuFika, iiNdlela zokuHlawula, ukuThengisa, ukuxoxa ngokuBukhoma, okanye ukutyhala kwiCRM ngokudityaniswa kwemveliso yokuthengisa. , IMicrosoft Dynamics, iPipedrive, iSalesmate, iZenkit, okanye iSharpSpring.
I-Webhooks kunye ne-API -Udibanise iSaqhwithi kunye newebhusayithi yakho okanye iqonga kunye ne-API yazo eyomeleleyo kunye neewebhooks.
Zama iSivunguvungu simahla ngoku
Ukubhengezwa: Ndililungu le Isiphango.
tags: urhwebo inboundIsiphangoIMicrosoft DynamicsIi-webinars ezifunekayoUmbhobhoii-webinars zangaphambi kokurekhodwawebinars eziphindaphindayoukuthengisaUmthengisiumnathawebinarIzikhumbuzo ze-imeyile zewebhuUkuthengisa kwiwebhuiqonga lewebhuUbhaliso lwewebhuwebinarzenkit
Iinkcukacha-manani ze-Ecommerce: Impembelelo ye-COVID-19 Ubhubhane kunye neLockdowns kwiRetail nakwi-Intanethi